DEGDEG: Kooxo hubeysan oo weerar ku qabsaday guriga Madaxweyne Ku xigeenka Kenya – Balcad.com Teyteyleey
DEGDEG: Kooxo hubeysan oo weerar ku qabsaday guriga Madaxweyne Ku xigeenka Kenya
Kooxo hubeysan ayaa weerar ku qaaday guriga uu degan yahay madaxweyne Ku xigeenka dowladda Kenya Wiliam Rutu, iyadoo haatan gudaha guriga uu ka socdo dagaal aan waxba la iskula harin oo dhex maraya ciidamada tababarkoodu sareeyo iyo kooxdii dableyda.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in kooxaha hubeysan ay dileen sarkaal ka tirsan ciidamada Kenya ee loo yaqaano GSU-da, isla markaana ilaalada guriga ay ka awood roonaadeen, iyadoo daqiiqado kaddib halkaasi ay gaareen ciidamada sida gaarka ah u tababaran.
Guriga madaxweyne ku xigeenka Kenya oo ku yaala gobolka gobolka Uasin Gishu ayaa la sheegayaa inay ku sugnaayeen ehelada Wiliam Ruto, saraakiil iyo xubno ka tirsan madaxda xisbiga Jubilee.
Madaxweyne ku xigeen Wiliam Ruto ayaa daqiiqado kahor ka baxay gurigiisa inta aan la weerarin, iyadoo saacadba saacadda ka dambeysa halkaasi ay ku sii qulqulayaan ciidamada ammaanka, waxaana la xiray gebi ahaanba wadooyinka ku dhow gurigaasi oo ku fadhiya dhul baaxadiisu weyn tahay.
Weerarkaan ayaa ku soo beegmaya xilli saacado kahor rag hubeysan ay afduubteen gaari iyo xubno ka tirsan xisbiga Jubilee magaalada Mandera ee gobolka W/Bari Kenya, iyadoo sarkaal u hadlay Booliska gobolkaasina falkaasi uu ku eedeeyay Al-Shabaab.
The post DEGDEG: Kooxo hubeysan oo weerar ku qabsaday guriga Madaxweyne Ku xigeenka Kenya appeared first on Ilwareed Online.
Gunmen attack Kenyan Deputy President Ruto’s residence, Ruto not home at time -TV